ဒီနေ့သိသင့်တဲ့ Tech သတင်း ၅ ခု (၃၁.၈.၂၀၁၇)
31 Aug 2017 . 11:27 AM
(၁) Google Pixel နဲ့ Nexus Devices တွေမှာ Android Oreo Stable Update ရရှိနေပြီဖြစ်
Google ကနေ Android 8.0 Oreo ကို ကြေညာပြီး ယခုအချိန်မှာတော့ Android Oreo Stable Version Update ကို Google ကနေထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Pixel နဲ့ Nexus Device တွေမှာ စတင်ရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Devices တွေကတော့ Google Pixel ၊ Pixel XL ၊ Pixel C ၊ Nexus 6P ၊ Nexus 5X နဲ့ Nexus Player တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
(၂) စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့မှာ Xiaomi Mi Mix2ကို ကြေညာမည်ဟု Xiaomi မှ အတည်ပြုပြောကြား
Xiaomi ရဲ့ Bezel-less ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်လာဦးမယ့် Xiaomi Mi Mix2ကို လာမယ့်စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့မှာ တရားဝင်ကြေညာသွားမယ်လို့ အတည်ပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ Xiaomi Mi Mix2ဟာ ယခင် Generation ထက် ပိုပြီးပါးလွှာတဲ့ ဘေးဘောင်တွေပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး Dual Camera လည်းပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
(၃) Chipset တစ်ခုထဲကိုပဲ အမြဲသုံးစွဲသွားဖို့မရှိဘူးလို့ ပြောကြားလိုက်တဲ့ Meizu
Meizu ကုမ္ပဏီကနေ နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ Meizu M6 Note Smartphone ဟာ ပထမဆုံးအနေနဲ့ Qualcomm Snapdragon Chipset ကို စတင်အသုံးပြုထားတဲ့ Meizu Smartphone ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Meizu ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ သူတို့ဟာ နောက်ပိုင်းဆက်ထုတ်လုပ်သွားမယ့်ဖုန်းတွေမှာ MediaTek Chipset အစား Snapdragon ကို လုံးဝပြောင်းလဲသုံးစွဲတော့မှာမဟုတ်ပဲ Qualcomm Snapdragon ၊ MediaTek နဲ့ Samsung Exynos Chipset တွေအကုန်လုံးကို အလျဉ်းသင့်သလို အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
(၄) MackBook မှာရောင်းချနေတဲ့ System ကို Hacking လုပ်ပြီး ၁ ဒေါ်လာနဲ့ ၀ယ်ယူနိုင်တဲ့ ဟက်ကာများ
ERPScan လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းက သုသေတနပညာရှင်တွေဟာ SAP နဲ့ Oracle တို့ ပူးပေါင်းဖန်တီးထားတဲ့ Point-of-Sale Terminals မှာ လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ဟာကွက်ကို တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီဟာကွက်ကိုအခြေခံပြီး ဟက်ကာတွေဟာ Apple MacBook ရဲ့ အရောင်းစနစ်ကို Hacking လုပ်ပြီး ၁ ဒေါ်လာနဲ့ဝယ်ယူနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကို တီထွင်ခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ဟာ Apple MacBook ကိုသာမက တခြားကုန်ပစ္စည်းတွေရဲ့ဈေးနှုန်းကိုလည်း ကြိုက်သလိုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းအပြင် Discount Rates ကိုလည်း ဖန်တီးနိုင်သလို Terminal တွေကိုလည်း အဝေးကနေ ဖွင့်ခြင်း ၊ ပိတ်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ပညာရှင်တွေဟာ SAP ရဲ့ POS Terminal အသုံးပြုသူတွေကို SAP Security Note 2476601 နဲ့ SAP Security Note 2520064 စတဲ့ Patches တွေကိုသာ သုံးဖို့အတွက် အကြံပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။
(၅) iPhone 8 အနေနဲ့Home Button မပါဝင်ဖို့ သေချာသလောက်ရှိနေ
Bloomberg အနေနဲ့ iPhone မှာ အရင်မြင်တွေ့ ခဲ့ရတဲ့ Home Button ဟာ ယခုလာမဲ့ iPhone 8 မှာမပါဝင်နိုင်တော့ဘူးလို့ သတင်းများထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ Home Button အစား Gesture Control အသစ်တွေပါဝင်လာနိုင်ပြီး iPad Pro မှာ အသုံးပြုနိုင်နေပြီဖြစ်တဲ့ Dock နဲ့ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ဖို ကိုလဲ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
(၁) Google Pixel နဲ့ Nexus Devices တှမှော Android Oreo Stable Update ရရှိနပွေီဖွဈ
Google ကနေ Android 8.0 Oreo ကို ကွညောပွီး ယခုအခြိနျမှာတော့ Android Oreo Stable Version Update ကို Google ကနထေုတျလုပျထားတဲ့ Pixel နဲ့ Nexus Device တှမှော စတငျရရှိနပွေီဖွဈပါတယျ။ အဆိုပါ Devices တှကေတော့ Google Pixel ၊ Pixel XL ၊ Pixel C ၊ Nexus 6P ၊ Nexus 5X နဲ့ Nexus Player တှပေဲဖွဈပါတယျ။
(၂) စကျတငျဘာလ ၁၁ ရကျနမှေ့ာ Xiaomi Mi Mix2ကို ကွညောမညျဟု Xiaomi မှ အတညျပွုပွောကွား
Xiaomi ရဲ့ Bezel-less ဖုနျးတဈလုံးဖွဈလာဦးမယျ့ Xiaomi Mi Mix2ကို လာမယျ့စကျတငျဘာလ ၁၁ ရကျနမှေ့ာ တရားဝငျကွညောသှားမယျလို့ အတညျပွုပွောကွားလိုကျပါတယျ။ Xiaomi Mi Mix2ဟာ ယခငျ Generation ထကျ ပိုပွီးပါးလှာတဲ့ ဘေးဘောငျတှပေါဝငျမှာဖွဈပွီး Dual Camera လညျးပါဝငျမှာဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။
(၃) Chipset တဈခုထဲကိုပဲ အမွဲသုံးစှဲသှားဖို့မရှိဘူးလို့ ပွောကွားလိုကျတဲ့ Meizu
Meizu ကုမ်ပဏီကနေ နောကျဆုံးထှကျရှိထားတဲ့ Meizu M6 Note Smartphone ဟာ ပထမဆုံးအနနေဲ့ Qualcomm Snapdragon Chipset ကို စတငျအသုံးပွုထားတဲ့ Meizu Smartphone ဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Meizu ကုမ်ပဏီကနပွေီးတော့ သူတို့ဟာ နောကျပိုငျးဆကျထုတျလုပျသှားမယျ့ဖုနျးတှမှော MediaTek Chipset အစား Snapdragon ကို လုံးဝပွောငျးလဲသုံးစှဲတော့မှာမဟုတျပဲ Qualcomm Snapdragon ၊ MediaTek နဲ့ Samsung Exynos Chipset တှအေကုနျလုံးကို အလဉျြးသငျ့သလို အသုံးပွုသှားမှာဖွဈတယျလို့ ပွောကွားလိုကျပါတယျ။
(၄) MackBook မှာရောငျးခနြတေဲ့ System ကို Hacking လုပျပွီး ၁ ဒျေါလာနဲ့ ဝယျယူနိုငျတဲ့ ဟကျကာမြား
ERPScan လုံခွုံရေးအဖှဲ့အစညျးက သုသတေနပညာရှငျတှဟော SAP နဲ့ Oracle တို့ ပူးပေါငျးဖနျတီးထားတဲ့ Point-of-Sale Terminals မှာ လုံခွုံရေးနဲ့ပတျသတျတဲ့ဟာကှကျကို တှရှေိ့ခဲ့ကွပါတယျ။ ဒီဟာကှကျကိုအခွခေံပွီး ဟကျကာတှဟော Apple MacBook ရဲ့ အရောငျးစနဈကို Hacking လုပျပွီး ၁ ဒျေါလာနဲ့ဝယျယူနိုငျတဲ့ နညျးလမျးကို တီထှငျခဲ့ပါတယျ။
သူတို့ဟာ Apple MacBook ကိုသာမက တခွားကုနျပစ်စညျးတှရေဲ့ဈေးနှုနျးကိုလညျး ကွိုကျသလိုသတျမှတျနိုငျပါတယျ။ ဈေးနှုနျးအပွငျ Discount Rates ကိုလညျး ဖနျတီးနိုငျသလို Terminal တှကေိုလညျး အဝေးကနေ ဖှငျ့ခွငျး ၊ ပိတျခွငျးမြားပွုလုပျနိုငျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ပညာရှငျတှဟော SAP ရဲ့ POS Terminal အသုံးပွုသူတှကေို SAP Security Note 2476601 နဲ့ SAP Security Note 2520064 စတဲ့ Patches တှကေိုသာ သုံးဖို့အတှကျ အကွံပေးထားတယျလို့သိရပါတယျ။
(၅) iPhone 8 အနနေဲ့ Home Button မပါဝငျဖို့သခြောသလောကျရှိနေ
Bloomberg အနနေဲ့iPhone မှာ အရငျမွငျတှခေဲ့ရတဲ့ Home Button ဟာ ယခုလာမဲ့ iPhone 8 မှာမပါဝငျနိုငျတော့ဘူးလို့သတငျးမြားထှကျရှိခဲ့ပါတယျ။ Home Button အစား Gesture Control အသဈတှပေါဝငျလာနိုငျပွီး iPad Pro မှာ အသုံးပွုနိုငျနပွေီဖွဈတဲ့ Dock နဲ့တှဲဖကျအသုံးပွုနိုငျဖို ကိုလဲ မြှျောလငျ့ရပါတယျ။
by 2B . 12 hours ago
by Zawyè .4weeks ago
by 2B .4weeks ago